Halyayga Kubada Cagta Ee Dalka Talyaaniga Arrigo Sacchi Oo Sheegay In Heshiiska Ronaldo Ay Dhibaato Xoogan Ka Abuuri Karto Qolka Labiska Kooxda Juventus – GOOL24.NET
Halyayga Kubada Cagta Ee Dalka Talyaaniga Arrigo Sacchi Oo Sheegay In Heshiiska Ronaldo Ay Dhibaato Xoogan Ka Abuuri Karto Qolka Labiska Kooxda Juventus
Halyayga kubada cagta dalka Talyaani Arrigo Sacchi ayaa ka hadlay heshiiska ay kooxda Juventus la gaartay xidiga kusoo guuleestay 5 jeer abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, wuxuuna sheegay in ay dhibaato xoogan ka abuuri doonto qolka labiska kooxda Bianconeri.
Kooxda kubada cagta ee Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaawday in heshiiska Cristiano Ronaldo oo haatan jira 33 sano, kadib markii uu kaga soo biiray kooxda reer Talyaani ee Juventus. Waxaana heshiiskan loogu magacdaray “heshiiskii qarniga”.
Cristiano Ronaldo ayaa ugu wareegay kooxda reer Talyaani ee Bianconeri qiimo dhan 100-million-euro, wuxuuna qalinka ku duugi doonaa heshiis ilaa iyo 2022, isla markaana uu sanadkii ku qaadan doono aduun dhan 30 million euros.
Hadaba Arrigo Sacchi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu kaga hadlay: “Ma aan caadeysan in aan ku dhex aragno gudaha Italy xidigaha ugu fiican aduunka, waxaana xaqiiq ah in Cristiano Ronaldo uu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan aduunka, iskaba daayee waa kan ugu wanaagsan”.
Sacchi ayaa wuxuu hadalkiisa intaas sii raaciyay: “Hambalyo ayaan u dirayaa Juve, heshiiskan waxa uu noqon doonaa mid fantastik ah Juventus iyo guud ahaan kubada cagta dalka Talyaaniga”.
Laakiin dhinaca kale Arrigo Sacchi ayaa wuxuu ka digay in heshiiskan uu sababi karo dhibaatooyin fara badan wuxuuna yidhi: “Waxa kaliya ee aan shaki qabo ayaa ah, Juventus waxay xili kasta heysataa maamul wanaagsan ee xasiloon, waxaana hubaal ah in mushaarka ciyaartoyda uu yahay mid kala duwan, laakiin sharciyada had iyo jeer waxay khuseeyaan qof walba”.
Arrigo Sacchi ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xidhay: “Sharciyadan waa inay sidoo kale khuseeyaan Cristiano Ronaldo, haddii aysan taasi dhicin, waxaa jiri doona dhibaatooyin badan ee ku aadan qolka labiska”.